यी नै हुन् संसारकै सबै भन्दा सुन्दर युवती, किन पर्छ पहिलो नजरमै तस्बिरमा ? (फोटो फिचर)::Nepal's Online News Portal
यी नै हुन् संसारकै सबै भन्दा सुन्दर युवती, किन पर्छ पहिलो नजरमै तस्बिरमा ? (फोटो फिचर)
सोम, साउन ३०, २०७४
काठमाडौँ । इन्टरनेटमा अहिले एक महिलाको फोटो भाईरल भएको छ । हरेक वेव साईटमा उनकै सुन्दरताको चर्चा छ । फेसबुकबाट लिएर ट्विटरसम्म मानिसहरुले उनकै फोटोहरु शेयर गरेका छन् । धरै मानिसहरु उनलाई उमानका सुल्तान क्बुस बिन सहिदको छोरा वा नातीको श्रीमती बताउदछन् ।
केहि न्युज च्यानलमा यी महिलालाई साऊदीका सऊदी शेख अव्दी अल मोहम्मदको श्रीमती पनि भनेर भनेका छन् । तर यो सब गलत हो साँचो हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिदैछौं यी महिलाको नाम शायमा अल हम्मादी हो यिनी एक प्रसिद्ध टिभी होस्ट हुन् र उमानमा बसोबास रहेको छ ।
उनि विवाहित हुन् अहिले कतारको स्टेट च्यानलमा आबद्ध छिन् । उनले सबै भन्दा पहिले उमानको सरकारी च्यानलमा सल्तनत अफ उमान टिभीमा होस्ट गरेकी थिइन् । उनको सुन्दरतामा केहि संका मान्नुपर्ने छैन उनको फोटो हेरेपछि नजर हटाउन मुस्किल हुन्छ ।